सबै पोशाक / जम्पसुट / सेटहरू
हामीले सामान्य रूपमा व्यवसाय गर्न पुन: सुरु गरेका छौं र आफ्नो आदेश तपाईँलाई सुरक्षित रूपमा र यथासम्भव छिटो प्राप्त गर्न कठिन कार्य गरिरहेका छौं. पोस्टेज समय COVID-१९ को परिणामस्वरुप वृद्धि भएको छ त्यसैले कृपया तपाईँको आदेश दिनुहुने अतिरिक्त समय अनुमति दिनुहोस्. यदि तपाईँ आफ्नो आदेश यथासम्भव छिटो आइपुग्न चाहनुहुन्छ भने हामी हाम्रो एक्सप्रेस जहाजको विकल्प मार्फत खरिद गर्न सिफारिस गर्दछौं.
वाइटलिस्ट उत्पादन र वितरणको हाम्रो उत्पादन दुवै प्रभावित भएको COVID-१९ को फैसलाले गर्दा धेरै आदेश आउन ढिला भएको छ. हाम्रा प्रभावित ग्राहकहरूलाई इमेल मार्फत सूचित गरिएको थियो र वेटलिस्ट आइटमहरू समाविष्ट आदेशहरू इमेल मार्फत अद्यावधिक प्राप्त गर्न जारी राख्नेछन्. कृपया ध्यान दिनुहोस कि हामीले हाम्रो वितरण केन्द्रहरुलाई छोड्दा एक पटक सुपुर्दगी को गतिमाथि कुनै नियन्त्रण छैन.
यदि तपाईँको आदेश प्रभावित भयो भनेर अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया न्युजिल्यान्डमा हाम्रो ग्राहक हेरचाह टोलीका रूपमा इमेल info@shekouwoman.com.
हाम्रो वितरण केन्द्रहरू सामान्य रूपमा आदेश बाहिर पठाउने कार्य जारी रहनेछ. सम्पर्क-मुक्त सुपुर्दगी सहित यस पटकको अवधिमा ग्राहकहरु र दोस्रोको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक सावधानी अपनाईरहेका छन्. पार्सल सुरक्षित स्थानमा वा यदि हस्ताक्षर आवश्यक भएमा, सुपुर्दगी चालकले सुरक्षित दूरीमा ग्राहकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नेछन्.
हामीले पनि आफ्नो प्रतिफल अवधि बढाएका छौं60दिनहरू. केही परिवर्तन भएमा हामी हाम्रो वेबसाइट अपडेट गर्नेछौं.
हाम्रो हृदयले COVID-१९ मा सबैभन्दा बढी प्रभावित जनता र समुदायहरूलाई बाहिर जानेछ.
+64 4887 1260